Maitiro ekuvhura iyo Apple Watch usingapinde yekuchengetedza kodhi Ndinobva mac
Maitiro ekuvhura Apple Watch usingapinde kodhi yekuchengetedza
Zviripachena uye pamberi pevakawanda venyu kuisa maoko pamusoro, tinofanirwa kutaura izvozvo iyo sarudzo yepamutemo zvachose izvo zvinotibvumidza kuti tivhure wachi tisina kumanikidza kodhi yatinofanira kuivhara, asi kare mukutanga kumisikidzwa iwe waifanira kuisa yayo yekutanga kodhi.
Uye zvakare, iyi sarudzo ndeye otomatiki uye inowedzerwa mumamiriro ekushandisa kweedu iPhone, Tarisa. Iyo Apple Watch yekuvhura kodhi yakanyanya kukosha uye kana iwe uchida kuidzima pamusoro pekuwedzera iyo kodhi yatakatara kubva panguva yayo yekutanga kumisikidzwa, makadhi atinawo eApple Pay anozobviswa otomatiki. Saka usati wabvisa kodhi zviri nani kuziva iyo sarudzo yekuvhura wachi pasina kuisa kodhi yacho nemaoko.
Uye ndezvekuti maawa mashoma apfuura shamwari yakauya ichitya nekuti Apple Watch yake haina kumubvunza kodhi yekuvhura paakangoisa wachi pawrist yake mushure mekuchaja. Izvi zvinokonzerwa nesarudzo yatinayo muzvirongwa zvekushandisa Tarisa - Code - Vhura ne iPhone.
Iri ibasa ratinokumbirwa kumisikidza pakutanga uye vazhinji vanokanganwa kuti vanaro vachishanda, nesarudzo iyi chinozadzikiswa zvakanangana ndechekuti wachi yacho yakavhurwa panguva imwechete yatinovhurirwa iyo iPhone. Nenzira iyi, kana tikamuka mangwanani, tinoisa wachi pawrist yedu uye ipapo pasina kubata chero chinhu paApple Watch isu tinosunungura iyo iPhone, tTichapedzisa wachi yakazarurwa otomatiki uye inoshanda zvizere pasina kudiwa kwekukiya mune yekuchengetedza kodhi.
Vazhinji venyu mune chokwadi chekuti munotoziva basa iri asi kune avo vasingazvizive zvinokurudzirwa chose kuti riite. Mukana wekurasikirwa / kuba kweiyo wachi Kana isiri muBluetooth renji, haigone kuvhurwa pasina kupinda kodhi yacho nemaoko, Saka hapana dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuvhura Apple Watch usingapinde kodhi yekuchengetedza
Kune iMac yekufambisa yekukahadzika, nyowani yekutakura kesi